Akpama App na tracks onye na-enweghị Ha Ịmara ?
Text ozi nwere ike mfe enyocha online site exactspy. E nwere ọtụtụ free software ngwa dị online, ma, ị na-eche na ha na-arụ ọrụ dị ka ihe ọma dị ka ụgwọ ndị? N'ezie ọ bụghị. Ihe kpatara ya bụ na i nwere ike na-zuru track ozi ederede, ma ọ gaghị ekwe omume iji nweta ihe niile n'okpuru otu ngwugwu.
Ọ dị mfe na-agụ ozi nke mmadụ na ekwentị mkpanaaka site exactspy-App na tracks onye na-enweghị Ha Ịmara. Ma ọ bụ gị na-arụ na ụlọ ọrụ, na nwunye, gf, na batman, ebe, okoyomde ndidọ ma ọ bụ afọ iri na ụma, ị nwere ike nweta ọrụ sitere na exactspy-App na tracks onye na-enweghị Ha Ịmara. Ọ bụ a pụrụ ịdabere na software nke i nwere ike inwe na ihe ọ bụla na ihe ọ bụla metụtara aka mobile ngwaọrụ, nke na-ịchọrọ ị gaa ledoo.
Ị nwere ike ị wụnye software na ngwaọrụ na-enweta ihe niile mmelite remotely. Ọ na-aghọ ezigbo mkpa n'ihi na ụfọdụ ndị na-ahụ ihe odide ịbụ okpụhọ site na igwe eji ekwu okwu ọ bụla na-eburu. Ma ọ bụ bụrụ nke na-ezisa ma ọ bụ ịnata ederede, i nwere ike inwe ozi site na exactspy-App na tracks onye na-enweghị Ha Ịmara n'ụzọ ị chọrọ. Ọ doo a dilemmatic ebe site na ndụ gị ma ị nwere ike ibu ha ghọta banyere ihe nile na-eme na gburugburu gi. E nwere ọtụtụ ndị ahịa, ndị ọkọdọ benefitted si exactspy ruru ya ọrụ ibe, ahịa nkwado, na akakan ọrụ na n'elu ihe nile, ezi mma ọrụ. Ị nwere ike ịnwale na ngwugwu ma ọ bụrụ na ọ suut ị, i nwere ike inwe ọrụ ndị ọzọ kwa. Ị nwere ike ịlele niile ngwaọrụ, wezụga naanị Izi ozi ọrụ. exactspy bụ nile n'ebe gị mkpa na ị pụrụ ịdabere na ha n'ihi na ihe niile metụtara mobile nnyocha.
Olee otú GPS track onye na-enweghị ha maara
Na ugbu dịruru ná njọ, ndị na-eji ọtụtụ ngwa, dị ka WhatsApp, Skype, Viber na ndị ọzọ na software ngwa ọdịnala n'ihi mkparịta ụka. Otú ọ dị, free ngwa adịghị enye track nke ndị dị otú ahụ software ngwa. Ị mkpa a ugwo version maka otu ma ọ bụrụ na ị wụnye exactspy-App na tracks onye na-enweghị Ha Ịmara, ị ga-bụla zuru ezu si dị iche iche na isi mmalite nke ederede nyefe.
Na exactspy-App na tracks onye na-enweghị Ha Ịmara na ị ga-enwe ike:
Ị nwere ike Download: Akpama App na tracks onye na-enweghị Ha Ịmara ?
Android app to track another phone without them knowing, App na tracks onye na-enweghị Ha Ịmara, Apps to track people without them knowing, How can i track someone without them knowing, Olee otú GPS track onye na-enweghị ha maara, How to track someone phone without them knowing for free, Is there an app to track someones phone without them knowing
← Ị Pụrụ anataghị ikike n'ime ihe iPhone Text Ozi Na ExxactSpy ?
→ Akpama App N'ihi Reading Someones Text Ozi ?